အနီရောင်ဂြိုလ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုအသွင်ပြောင်းငါးအင်္ဂါဂြိုဟ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အနီရောင်ဂြိုလ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုအသွင်ပြောင်းငါးအင်္ဂါဂြိုဟ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ” New York မှာအလန် Yuhas ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 5th နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 21.15 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တစ် Rover အနီရောင်အမြေဆီလွှာကိုကျော် trundling နှင့်အတူ, လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာမြေန်းကျင်အလုပ်ကိုမှာလေထုနှင့်အသင်းများကတဆင့်အာကာသယာဉ်ငုပ်, အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်နာဆာမှလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦး string ကိုဖွင့်ပေးတော်မူပြီ. ဒီနေရာမှာ၏အဓိကတွေ့ရှိချက်တချို့ရှိနေပါတယ် 2015.
ဆယ်စုနှစ်များစွာပြီးနောက်စည်ပင်, အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်အရည်ကိုရေအထောက်အထားစာသားအတိုင်းဇူလိုင်လအတွင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမှပေါ်ထွက်လာ, ချောက်နှင့်မီးတောင်ထိပ်ဝမြို့ရိုးသည်ကဆင်းပြေးနေ နွေရာသီရာသီကျော်. တစ်ဦးကနာဆာအဖွဲ့ကဓါတ်ကိုပြန်လည်ဆားများကိုတွေ့ရှိရ, အရည်ကိုရေတစ်ဆေးလိပ်မသောက်သေနတ်, မှောင်မိုက်တဲ့အစွန်းအထင်းကိုတွေအပြင်မြေပြင်အနေအထားကဆင်း trickled ဘယ်မှာလေးဆိုဒ်များမှာ.
နာဆာသေး briny တက်လာပြီးလျှင်စီးဆင်းမှု၏အရင်းအမြစ်ကိုသိရပါဘူး, မြေအောက်ရေခဲသို့မဟုတ်မြေအောက်ရေစုလွှာမှထနျနိုငျသော, ဒါမှမဟုတ်လေထုထဲကနေဖြည်းညှင်း. အတိတ်မစ်ရှင်ကိုရေသဲလွန်စတွေ့ကြပြီ, ဖြစ်အားထင်ရှားသောအရာကိုပုံတွေကိုအပါအဝင် သေးငယ်တဲ့မြစ်ရေ ပင်ကိုရေ gullies ကဆင်းလောင်း, ဒါပေမယ့်နွေရာသီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအများစုကိုဘဝကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရည်၏ပထမဦးဆုံးအတည်ပြုပြောကြားသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ချီးကျူ​​းလိုက်ပါတယ်ခဲ့သည်.
ထိုရှာပုံတော်အတွက်နာဆာရဲ့ဂါထာ "ကိုကိုရေကိုလိုက်နာ" ဖြစ်ပါတယ် - - သုတေသီများသည်ရှည်လျားအရည်ကိုရေအသက်အဘို့အမူလတန်းပစ္စည်းကြောင်းကျင်းပခဲ့ကြပါပြီဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအခုဆိုရင်မြစ်ရေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဘယ်လိုကျော်တစ်ဦးအကြပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရ. သုံးနှစ်အဘို့အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းသော Curiosity rover မြုံမက, နှင့် ကိုစိုစွတ်သောဒေသများညစ်ညမ်းစေနိုင်ကြောင်း ထိုဠာမှတဆင့်အာကာသယာဉ်ပေါ်ကိုမှီဝဲကြောင်းကုန်း bug တွေနှင့်အတူ. အဆိုပါ Rover အဝေးကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ကြောင်း, ထိုအလင်းတန်းများဖြာကိုတိုင်းတာမယ်လို့လေဆာနှင့်အတူ, သို့မဟုတ်ပါကအချို့သောရွှံ့တွေထက်တောင်မှချဉ်းကပ်အန္တာရာယ်နိုင်ကြောင်း.
ကြာသပတေးနေ့တွင်, နာဆာကြေညာခဲ့သည် အင်္ဂါဂြိုဟ် '' လေထုနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုစီးရီး ကြောင်းအင်္ဂါဂြိုဟ်မှဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းပေးကူညီနိုငျ, လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းရာဒေါ်လာဘီလီယံတစ်ဦးစိုစွတ်သောခဲ့သည်, တစ်ဦးနှင့်အတူလေထုပူနွေးကမ္ဘာကြီး 100 ကြိမ်ထူ. ယနေ့ခေတ်တွင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ခြောက်သွေ့, အအေးပိုင်းနဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်းအားဖြင့်တရစပ် - ကမ္ဘာမြေဝန်းရံနှင့်နေရောင်အပေါ်ပေါက်ကွဲသံကနေကာကွယ်ပေးသည်သောအားကြီးသောသံလိုက်စက်ကွင်းမပါဘဲတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်.
နာဆာရဲ့ Maven အာကာသယာဉ်ကနေတွေ့ရှိချက်, ၎င်း၏ပါးလွှာတဲ့လေထုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ကဆြုံးရောက်ရှိခဲ့သည်ထားတဲ့, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေကြောင်းဖြေရှင်းပေးရန်ကူညီနေကြပါတယ်. မစ်ရှင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြောင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမုန်တိုင်းများတွေ့ရှိရ, အရာအပြင်ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအင်နှင့်သံလိုက်, တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မှုနှုန်းမှာအင်္ဂါဂြိုဟ်၏လေထုထဲကနေအမှုန်လွအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်.
"တစ်ဦးငွေသားမှတ်ပုံတင်ထံမှအနည်းငယ်ဒင်္ဂါးပြား၏ခိုးယူလိုပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်း, ဆုံးရှုံးမှုအချိန်ကျော်သိသိသာသာဖြစ်လာ,"ဘရုစ်ကပြောကြားခဲ့သည် Jakosky, Maven ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမုန်တိုင်းများအစောပိုင်းကနေရောင်ခြည်ကို system ရဲ့သမိုင်းအတွက်ပိုပြီးအဖြစ်များနှင့်ပြင်းထန်သောခဲ့ကြ, နေရောင်အပေါ်ဖြစ်ရပ်များအင်္ဂါဂြိုဟ်၏ရေနှင့်လေထုဘို့ကအဓိကဂယက်ရိုက်ခဲ့ကြအံ့သောငှါအဓိပ်ပာယျ.
အဆိုပါမစ်ရှင်ကိုလည်းဗိုက်ကင်းမစ်ရှင်ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အင်္ဂါဂြိုဟ် '' လေထု၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုင်းတာ 40 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က, နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုအထက်လှုပ်ရှားဖုန်မှုန့်တစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ငွေပမာဏတွေ့ရှိရ. နေရောင်ခြည် system ကိုဖြတ်သန်းယျတံခှနျနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်ခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်နတ်မင်းကြီးအစေ့ - သုတေသီကြောင့် interplanetary ဖုန်မှုန့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြု.
အောက်တိုဘာလအတွက်, နာဆာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအထိကြာမြင့်ပါပြီနိုင်ကြောင်းရေကန်၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ 10,000 အနှစ် - ဖြစ်နိုင်သည် ဘဝကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အဘို့အလုံလောက်တဲ့ရှည်လျား ရေတိမ်ပိုင်းမြစ်ရေနှင့် Delta တစ် marshy ရှုခင်းအတွက်. အနည်အနှစ်များ၏ analysis ကိုရေစီးကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြသ, ထိုအလွန်ကြီးမားသော Gale မီးတောင်ထိပ်ဝသို့ကျောက်စရစ်နှင့်သဲကဆင်းတင်ဆောင်လာသော. အဆိုပါမီးတောင်ထိပ်ဝ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တောင်ပေါ်မှာ Sharp ၏ဟုခေါ်မြင့်မားသောတောင်ပေါ်ရပ်တည်, ကိုယ်တိုင်ကအနည်အနှစ်များအလွှာသုံးခု-မိုင်စုစည်းနေခြင်း.
ဧပြီလထဲမှာ, တွေ့ရတဲ့ Curiosity rover မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရည်ကိုရေအထောက်အထား အင်္ဂါဂြိုဟ်၏, အရည်ဆားရည်အိုင်အဘို့ကိုယ့်လက်ျာဘက်သော Gale မီးတောင်ထိပ်ဝ၌၎င်း, မှတျတမျးတငျခဲ့သောအပူချိန်. အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ဂြိုဟ်၏မြေဆီလွှာကိုဆားမှအရည်ကိုကျေးဇူးတင်နေထိုင်နိုင်သောရေနှင့်အတူစိုစှကြောင်းအကြံပြု, ကယ်လစီယမ် perchlorate, အကြောင်းမှဆင်းအရည်ကြောင့်စောင့်ရှောက် -70C.
Maven သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေတိုက်အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ကျယ်ပြန့်နအေိမျကိုဖြတ်ပြီးမြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်၏ညီမျှဖန်တီးပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်, တစ်သံလိုက်စက်ကွင်းအားဖြင့် unguarded စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုလေထု high-စွမ်းအင်ကိုအမှုန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့. လူသားတွေဟာသီအိုရီကိုအနီရောင်အဖြစ်တွေအပြင် aurora မြင်နေရတယ်, မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်တန်းပေါ်အပြာနှင့်အစိမ်းအရောင်များကို, ဒါပေမဲ့နာဆာသေးအလင်းအိမ်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သိနိုင်မပါဘူး, ယင်း၏ Rovers သူတို့ကိုမြင်ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာကင်းမဲ့ပြီးကတည်းက.
အဆိုပါ aurora ကိုလည်းအင်္ဂါဂြိုဟ်၏အများဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေတိုက်နှုန်းအားဖြင့်ဒဏ်ကြောင်းအကြံပြု, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖြစ်ရပ်များအားလုံးဂြိုလ်ပတ်ပတ်လည်လေထုဆုံးရှုံးမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သောစိတ်ကူးမှသက်သေအထောက်အထားများချေး. အချို့ကသံလိုက်စက်ကွင်းဂြိုလ်ပတ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိ, ဒါပေမယ့်ဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြောင့်တစ်ချိန်ကရှိခဲ့ကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒိုင်းလွှားကိုကင်းမဲ့.
သငျသညျအဘယ်အရာကိုမျှ Abou ကိုသိပါသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်တာမှ Key ကို ...
Boost မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူ Curiosity နိုင်သလား?
18162	0 အလန် Yuhas, အပိုဒ်, သိချင်စိတ် Rover, အင်္ဂါဂြိုဟ်, နာဆာ, သတင်း, သိပ္ပံ, အာကာသ
← အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: မှားယွင်းတဲ့ထောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကုန်အကျအမှားထေူ Samsung ကဂီယာ S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့စမတ်နာရီများအတွက်ကံကောင်းသတ္တမအချိန် →